Ikhampasi Yezingxenye Zomjaho - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 21 ye-Ikhampasi Yezingxenye Zomjaho)
Izingxenye zomjaho i-aluminium clamp ngosayizi ohlukile
Izingxenye zomjaho i-aluminium clamp ngosayizi ohlukile IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela okukhulu...
Ikhampasi ye-aluminium eyenziwe ngezifiso
Ikhampasi ye-aluminium eyenziwe ngezifiso Incazelo Yomkhiqizo I-Round carbon fiber tube clamp isetshenziswa kabanzi emkhakheni we-drone.Nxa inenzuzo elula yesisindo, amakhasimende amaningi ajabule ngezinto ze-aluminium. Ubulukhuni be-aluminium engu-6061 banele.Certianly, uma udinga i-super hard, mhlawumbe ungakhetha...
Ikhampasi yeCustom ye-nonstandard Anodized Aluminium Tube
Ikhampasi yeCustom ye-nonstandard Anodized Aluminium Tube I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela okukhulu...
CNC milling red aluminium diving ikhampasi isesekeli
CNC milling red aluminium diving ikhampasi isesekeli eyaziwa nangokuthi i-electrostatic powder fafaza, izinzuzo zalobu buchwepheshe zibhalwe kubuchwepheshe obuthuthukisiwe, ukonga amandla futhi usebenza kahle, uphephile futhi uthembekile, umbala okhanyayo njalonjalo. Umgomo wokusebenza kwawo ukuthi i-powder...
Ikhwalithi ephezulu ye-Aluminium Precision esezingeni eliphakeme yezingxenye zezindiza
Ikhwalithi ephezulu ye-Aluminium Precision esezingeni eliphakeme yezingxenye zezindiza I-CNC isho ukusikwa kwezinto kusetshenziswa amathuluzi womshini we-CNC. Inqubo yemishini ye-CNC ihumusha imodeli ye-3D CAD futhi idlulisela imininingwane emshinini we-CNC. Inzuzo enkulu yale nqubo ukuthi izingxenye ezikhiqizwe...
Ikhampasi Yokukhishwa Okuqinile kwe-Aluminium
Ikhampasi Yokukhishwa Okuqinile kwe-Aluminium I-12mm-30mm yangaphakathi ye-aluminium carbon fiber tube clamp clamp, ukubukeka kwe-cnc machining ukubukeka okuhle, ukwelashwa komhlaba. Izinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu ye-aluminium multi-axis universal, isebenzisa indiza ye-aluminium yendiza, ukukhanya kwesisindo...
Ikhampasi ye-aluminium yangokwezifiso ye-20X30mm octagon
Ikhampasi ye-aluminium yangokwezifiso ye-20X30mm octagon Incazelo Yomkhiqizo I-12mm-30mm yangaphakathi ye-aluminium pipe tube clamp yangaphakathi, ukubopha kwe-cnc machining ukubukeka okukhangayo, ukwelashwa komhlaba ongaphezulu. Izinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu ye-aluminium multi-axis universal bomba,...
Izingxenye zomjaho we-aluminium racing kanye ne-CNC machining
Izingxenye zomjaho we-aluminium racing kanye ne-CNC machining Ngezansi kunezinzuzo zemishini ye- CNC: (1) Inani elikhulu lokunciphiswa kwenombolo yokufakwa kwamathuluzi, futhi izingxenye eziyinkimbinkimbi zezingxenye azidingi ukutholwa kanzima. Uma sifuna ukushintsha ukwakheka nosayizi wezingxenye, kudingekile kuphela...
I-Carbon Fiber Plate yezingxenye ze-UAV
I-Carbon Fiber Plate yezingxenye ze-UAV Ubukhulu balolu hlobo lukaphebula we-carbon fiber ngu-500x600mm. Isebenzisa i-100% yekhabhoni fiber fiber ukwenza. Eminyakeni yamuva, amapuleti e-carbon fiber adume kakhulu ku-RC. Futhi, sinamapuleti engilazi ekhabhoni kanye namapuleti engilazi e-fiber. Insiza ye-OEM ne-ODM...
I-plate fiber kabhayili engaphezulu ephelele yezingxenye ze-UAV
I-plate fiber kabhayili engaphezulu ephelele yezingxenye ze-UAV Ubukhulu balolu hlobo lukaphebula we-carbon fiber ngu-500x600mm. Isebenzisa i-100% yekhabhoni fiber fiber ukwenza. Eminyakeni yamuva, amapuleti e-carbon fiber adume kakhulu ku-RC. Futhi, sinamapuleti engilazi ekhabhoni kanye namapuleti engilazi e-fiber....
Ikhampasi Yezingxenye Zomjaho Amagama Ezingxenye Zomjaho Womjaho Izingxenye Zomjaho Womjaho Ikhampasi Yezintengo Ephelele Ingxenye Yomjaho weRC Ukusika Ezinye Izingxenye Zekhabhoni Ukusika Ezinye Izingxenye Zosayizi Ikhampasi Ekhethekile yeKhamera
Ikhampasi Yezingxenye Zomjaho Amagama Ezingxenye Zomjaho Womjaho Izingxenye Zomjaho Womjaho Ikhampasi Yezintengo Ephelele Ingxenye Yomjaho weRC